काबुलवाला ! 'मिनी' हरुको ख्याल गर्नु !! | Nagarik News - Nepal Republic Media
काबुलवाला ! 'मिनी' हरुको ख्याल गर्नु !!
३२ श्रावण २०७८ ३ मिनेट पाठ
रवीन्द्रनाथ टैगोरको चर्चित कथा ‘काबुलीवाला’ पढेको दुई दशकभन्दा बढी भइसक्यो। कथाकी बाल पात्र मिनी र उसलाई निस्वार्थ माया गर्ने रहमत अझैपनि यादमा बाचेका छन्। आइतबार तालिबानले काबुल कब्जा गरेपछि काबुलीवाला कथासंगै रहमत र मिनीहरुको संझनाले सताएको छ।
आशा गरौ, तालिबानमा काबुलीवाला कथाका थुप्रै ‘रहमत’ भेटिने छन्। तिनीहरुको झोलामा बारुद हैन किसमिस र कापी कलम हुने छ। जसका कारण अब मिनीहरुको अधिकार खोसिने छैन। मिनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा पढ्न पाउने छन्। स्वतन्त्ररुपमा बाच्न पाउने छन्।
टैगोरले कथामा काबुलबाट कलकत्ता आएको रहमतले व्यापार गर्नेक्रममा मिनीलाई गरेको माया उल्लेख गरेका थिए। सानी बालिकालाई निस्वार्थरुपमा किसमिस र खजुर दिएको क्षण बर्णन गर्दै सिंगो काबुलको प्रेमभाव दर्शाएका थिए। जेल परेका रहमत छुटेलगत्तै मिनीको विवाहमा सहभागी हुन घरमै पुगेका थिए। डराएका मिनीका बुवालाई रहमतले काबुलमा मिनीजस्तै आफ्नो छोरी पनि रहेकाले न्यास्रो मेट्न आएको भन्दै सुनाएको क्षणलाई मानवीयताको उत्कृष्ट नमूनाको रुपमा लेखकले प्रस्तुत गरेका थिए। त्यो कथा पढेसंगै काबुल र काबुलीवाला प्रति भित्री मनबाटै श्रद्धाभाव जागेको थियो।
तर केही दशक यता भने यो सुन्दर मुलुक गृहयुद्धले आहत बनाएको छ। किसमीसको स्वादिलो भूमीलाई शितयुद्धताका प्रतिद्वन्द्वी खजुरहरुले सत्यानास बनाएको धेरैको बुझाई छ। काबुलको अहिलेको अवस्थाको लागि को कति दोषीभन्दा पनि काबुल पीडामा रहेको खबरले अत्यन्त दुःखी बनाएको छ।
तालिबानले काबुल कब्जा गरेसंगै टैगोरका कथाका तिनै पात्रको स-सना संवेदनाहरुको याद आइरहेको छ। त्यसैले होला संसारभरका समाचारमा आतकंकारी घोषणा गरिएका तालिबानमा मैले अझैपनि रहमत भेटिने आशा पालेकै छु। किनकी आस्थाका ‘रहमत’हरु कहिल्यै मर्दैनन्। चाहे ति कथाकै पात्र किन नहुन्। काबुलमा रहमतहरु भेटिने विश्वासले मलाई ‘मिनी’हरु सुरिक्षत हुन्छन् भन्ने आशा पनि पलाएको छ।
आस्थाका ‘रहमत’हरु कहिल्यै मर्दैनन्।चाहे ति कथाकै पात्र किन नहुन्। काबुलमा रहमतहरु भेटिने विश्वासले 'मिनी’हरु सुरिक्षत हुन्छन् भन्ने आशा पलाएको छ।
यति बेला त्यहाँका विमानस्थलमा काबुल छाडने्को भिड देखिएको छ। कथामा मिनीका बुबाले मिनीको विवाह खर्चको पैसा कटाएर रहमतलाई मिनीकै उमेरकी छोरी भेट्न काबुल पठाएका थिए। त्यसैले आशा छ काबुल फर्केका रहमतहरु छिमेकी मुलुकका मिनी र तिनका परिवारलाई सुरक्षितरुपमा उनीहरुको मुलुक फर्काउन सहयोग गर्ने छन्। भारतमा रहेकी मिनीमा आफ्नी छोरीको अनुहार देख्ने काबुलीवालाले काबुलमा रहेका मिनीहरुमा पनि आफ्नी छोरीको अनुहार देख्ने छन्।
अफगानिस्तानमा तालिवानको आगमनसंगै सबैभन्दा बढी छोरीहरुको अधिकार खोसिने डर छाएको छ। सन २०१३ मा पाकिस्तानी मलाला युसुफजाईलाई बालिका शिक्षाको पक्षमा अभियान चलाएको भन्दै तालिवानले गोली प्रहारको घटनाले सबैको यो धारणा आएको हो।
तर हालसालै तालिवानका एक अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामा अफगानी छोरीहरुको पढाईमा कुनै बाधा नहुने विचार पोखेसंगै झिनो आशा पलाएको छ। आशा गरौ, तालिवानमा काबुलीवाला कथाका थुप्रै ‘रहमत’ भेटिने छन्। तिनीहरुको झोलामा बारुद हैन किसमिस र कापी कलम हुने छ। जसका कारण अब मिनीहरुको अधिकार खोसिने छैन। मिनीहरुले स्वतन्त्ररुपमा पढ्न पाउने छन्। स्वतन्त्ररुपमा बाच्न पाउने छन्।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७८ १५:०४ सोमबार